बिहानै लालबाबु पण्डितले किन लेखे यस्तो विरक्तलाग्दो कुरा ? - ramechhapkhabar.com
बिहानै लालबाबु पण्डितले किन लेखे यस्तो विरक्तलाग्दो कुरा ?
नेकपा एमालेको नयाँ केन्द्रीय कमिटी चयन भएको भोलिपल्ट अर्थात् आज बुधबार बिहानै नेता लालबाबु पण्डितले निराशाजनक स्टाटस लेखेका छन्। चितवनमा आयोजित पार्टीको दसौं महाधिवेशनका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारी सूचीमा नसेमेटेपछि एमालेका सबै कार्यकारी पदबाट बिदा लिएको घोषणा गरेका नेता पण्डितले सामाजिक सञ्जालमा निकै विरक्तलाग्दो कुरा लेखेका हुन्।
मोरङमा शेखरविरुद्ध गरिएको मोर्चाबन्दी विफल, संस्थापन इतरका लिम्बु बिजयी
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत मोरङमा भइरहेको जिल्ला अधिवेशनमा केन्द्रीय सभापतिका आकांक्षी डा. शेखर कोइरालालाई कमजोर देखाउन सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच गरेको चुनावी तालमेलले फेल खाएको छ ।
पहिलो चरणमा नतिजा नआएपछि मंगलवार भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देउवा र पौडेल पक्षबीच तालमेल भएको थियो । केन्द्रीय सभापतिका आकांक्षी समेत रहेको र कोइराला पक्षका उमेदवारलाई हराएर शेखरको गृह जिल्लामै कमजोर छन् भन्ने सन्देश दिन खोजिए पनि मंगलवारको मतपरिणामले तालमेललाई उल्टाइदिएको छ ।
पहिलो चरणमा संस्थापन देउवा पक्षका दिलिप गच्छदार, संस्थापनइतर कोइराला पक्षका डिकबहादुर लिम्बु र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका यदु विष्टबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । पहिलो चरणको चुनावमा लिम्बूले सर्वाधिक १ हजार ५४४, गच्छदारले १ हजार १६६ र विष्टले ५६३ मत ल्याएका हुन् । कुनै पनि उम्मेदवारले ५१ प्रतिशत मत ल्याउन नसकेकाले मंगलवार पुनः मतदान भएको थियो ।
मंगलवार भएको मतदानमा कोइराला पक्षका लिम्बुलाई घेराबन्दी गरेपनि मतदाताले भने त्यसलाई विफल बनाइदिएका छन् । मंगलवार मध्यरातमा सकिएको मत परिणाम अनुसार लिम्बुले १ हजार ९ सय ६ मत प्राप्त गर्दा गच्छदारले एक हजार चार सय २५ मत पाएका थिए ।